July 2017 – Eleven Media Group
အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ ပူးတွဲပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး အထောက်အကူပြု ဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာ ကွင်းဆင်းလေ့လာရေး ပြုလုပ်
Posted on July 31, 2017 by Eleven Media Group
ဒေသခံများနှင့် တွေ့ဆုံနေသည့် အစိုးရအဖွဲ့နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများကို တွေ့ရစဉ်
အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များပူးတွဲ၍ ငြိမ်းချမ်းရေးအထောက်အကူပြု ဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာ ကွင်းဆင်း လေ့လာရေးခရီးအား ဇူလိုင် ၃၁ ရက်တွင် သွားရောက်ခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးက ထုတ်ပြန်သည်။
ထုတ်ပြန်ချက်တွင် အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန ဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူ၍ နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသော ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ရန်ပုံငွေဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (Joint Coordination Body for Peace Process Funding-JCB) ၏ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်းက ကျင်းပခဲ့သော အစည်းအဝေးတွင် ဦးစားပေး ကဏ္ဍလေးရပ်အဖြစ် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးကဏ္ဍ၊ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကဏ္ဍ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအထောက်အကူပြု ဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍနှင့် အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကဏ္ဍတို့ကို သတ်မှတ်ကြောင်း သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ယင်းဦးစားပေးကဏ္ဍကြီး လေးရပ်တွင် ပါဝင်သော ငြိမ်းချမ်းရေး အထောက်အကူပြု ဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ (Peace Supporting Development Sector) ကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရန် ရည်ရွယ်၍ ပူးတွဲကွင်းဆင်း လေ့လာရေး ခရီးစဉ်ကို သွားရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်သော ပူးတွဲကွင်းဆင်းလေ့လာရေး အဖွဲ့သည် မွန်ပြည်နယ် သထုံခရိုင်သထုံမြို့နယ် အင်းကွေးကျေးရွာသို့ ဇူလိုင် ၃၁ ရက်တွင် သွားရောက်ခဲ့ပြီး ဒေသခံများနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပူးတွဲကွင်းဆင်းလေ့လာရေးအဖွဲ့က ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဒွန်တွဲ ဆောင်ရွက်သွားရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေသခံများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ နှစ်ဖက်ပူးတွဲကာ ယခုကဲ့သို့ ကွင်းဆင်းလေ့လာမှု ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများအား ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
ကျေးရွာနေပြည်သူများက ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်သောလမ်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ နေရပ်စွန့်ခွာ တိမ်းရှောင်နေရသူများအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးပေးရေး အပါအ၀င် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး လိုအပ်ချက်များကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားရာ ကျေးရွာ၏ ပကတိလိုအပ်ချက်များကို အခြေခံ၍ လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပူးတွဲကွင်းဆင်းလေ့လာရေးအဖွဲ့က ကတိပြုပြန်လည် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပူးတွဲ ကွင်းဆင်းလေ့လာရေးအဖွဲ့တွင် အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်း၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၊ ဒေါက်တာ ၀င်းမြတ်အေး၊ မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအေးဇံ စသူတို့ ပါဝင်ပြီး တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် (NCA) လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် ပအိုးဝ်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ချုပ် (PNLO) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်မြင့်ထွန်းနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ပြီး အခြားဒေသများသို့ ဆက်လက်သွားရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsLeaveaComment on အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ ပူးတွဲပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး အထောက်အကူပြု ဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာ ကွင်းဆင်းလေ့လာရေး ပြုလုပ်
အာဖဂန်မြို့တော်ကဘူးရှိ အီရတ်သံရုံးအား တိုက်ခိုက်ခဲ့ဟု IS အဖွဲ့ ထုတ်ပြန်
ဇူလိုင် ၃၁ ရက်က ကဘူးရှိ အီရတ်သံရုံးအနီး အသေခံဗုံးခွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်နေရာ၌ တွေ့ရသော အာဖဂန်လုံခြုံရေးများ (Photo: AFP)
အာဖဂန်နစ္စတန်မြို့တော် ကဘူးရှိ အီရတ်သံရုံးအပြင်ဘက်တွင် ဇူလိုင် ၃၁ ရက်၌ အသေခံဗုံးခွဲသမားတစ်ဦးက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဖောက်ခွဲခဲ့ပြီး စစ်သွေးကြွများက သံရုံးဝင်းထဲသို့ ချိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်း အာဖဂန်တာဝန်ရှိသူများက ပြောကြားခဲ့သည်။
တိုက်ခိုက်မှုစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် အကြမ်းဖျင်း လေးနာရီခန့်အကြာတွင် တိုက်ခိုက်သူအားလုံးကို ချေမှုန်းနိုင်ခဲ့ပြီး သံရုံးဝင်းကို ပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ သံရုံးဝန်ထမ်းအားလုံး ဘေးကင်းခဲ့ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည်သာ ဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရခဲ့ကြောင်း အာဖဂန်ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သို့သော် ထုတ်ပြန်မှုများမှာ ကွဲလွဲနေကြောင်း သိရသည်။
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် အသေခံဗုံးခွဲသူတစ်ဦးက သံရုံးဝင်ပေါက်၌ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဖောက်ခွဲခဲ့ပြီး စစ်သွေးကြွ လေးဦးထက်မနည်းက သံရုံးကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက အချိန်မီရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး အီရတ် သံတမန်ဝန်ထမ်းများအား ဘေးကင်းရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်း၊ ရဲတစ်ဦးသာ ဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရခဲ့ကြောင်း ယင်းကြေညာချက်က ဆိုခဲ့သည်။ အီရတ်သံရုံးသည် ဟိုတယ်များ၊ ဘဏ်များ၊ စူပါမားကတ်ကြီးများနှင့်အတူ ရဲစခန်းများရှိသည့် ကဘူးမြို့ အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။
သို့သော် တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည့် နေရာ၌ရှိနေသော အာဖဂန်လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့် မျက်မြင်သက်သေများကမူ တိုက်ခိုက်သူများအား သံရုံးအနီးတွင် ကားဖြင့်လာချသွားခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းနောက်၎င်းတို့က သေနတ်များဖြင့် ပစ်ခတ်၍ သံရုံးထဲသို့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းနောက် သံရုံးထဲတွင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဖောက်ခွဲပစ်ခဲ့ကြကြောင်း ပြောကြားခဲ့ကြသည်။
ဘဂ္ဂဒက်ရှိ အီရတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ဘေးကင်းရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့သူများထဲတွင် သံမှူးလည်း ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း၊ အခြေအနေအား အာဖဂန်တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ စောင့်ကြည့်နေကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
IS အဖွဲ့၏အာဖဂန်အဖွဲ့ခွဲက ၎င်းတို့၏ အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးသည် အီရတ်သံရုံးအား တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး လုံခြုံရေးနှင့် သံရုံးဝန်ထမ်း ၂၇ ဦးထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ၎င်းတို့၏ ၀ါဒဖြန့်သတင်းအေဂျင်စီ ဗာဆေတွင် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ယင်းစစ်သွေးကြွအဖွဲ့သည် တိုက်ခိုက်မှုများတွင် သေဆုံးဒဏ်ရာရသူ အရေအတွက်ကို အမြဲလိုလိုချဲ့ကား ထုတ်ပြန်လေ့ရှိသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် ပထမခြောက်လအတွင်း အာဖဂန်၌ သေဆုံးခဲ့သည့် အရပ်သား စုစုပေါင်း၏ ရာခိုင်နှုန်း ၂၀ နီးပါးမှာ ကဘူးမှဖြစ်သည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ၏ မကြာသေးမီက ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အစီရင်ခံစာအရ သိရသည်။ ကဘူးတွင် မေနှောင်းပိုင်းက တိုက်ခိုက်မှုကြီး တစ်ခုအတွင်း လူပေါင်း ၁၅၀ ကျော်သေဆုံးပြီး ရာနှင့်ချီ၍ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
Posted in InternationalLeaveaComment on အာဖဂန်မြို့တော်ကဘူးရှိ အီရတ်သံရုံးအား တိုက်ခိုက်ခဲ့ဟု IS အဖွဲ့ ထုတ်ပြန်
ရာထူးတိုး မမျှတဟုဆိုကာ နိုင်ငံအနှံ့ရှိ နည်းပညာတက္ကသိုလ်နှင့် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ဆရာ၊ ဆရာမများ ဖဲကြိုးပြာလှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်
ပခုက္ကူနည်းပညာတက္ကသိုလ်တွင် ဖဲကြိုးပြာလှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်နေသည့် ဆရာ ဆရာမများကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – သက်ထိန်ဝင်း)
ဇူလိုင် ၃၁ ရက်မှ စတင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ရှိ နည်းပညာတက္ကသိုလ်နှင့် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များရှိ ဆရာ ဆရာမများက ဖဲကြိုးပြာလှုပ်ရှားမှုအား စတင်ပြုလုပ်ကြသည်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန တစ်ခုတည်းအောက်တွင် ရှိသော်လည်း အဆိုပါ နည်းပညာတက္ကသိုလ်နှင့် ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်တို့တွင် ရာထူးတိုးခြင်းမှာ အခြားသော ဌာနများနှင့်မတူဘဲ ကွဲပြားလျက်ရှိသည်။
အခြားသောဌာနများတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်သက်ရှိပါက ရာထူးတိုးခြင်းများ ရှိသော်လည်း ယင်းတက္ကသိုလ်များတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည့် ဆရာ ဆရာမများမှာ ရာထူးတိုးခြင်းမရှိကြောင်း သိရသည်။
ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ရှိ နည်းပညာတက္ကသိုလ်နှင့် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တို့မှ ဆရာ ဆရာမများက အဆိုပါ လှုပ်ရှားမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ထူးခြားမှုမရှိပါက ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရာထူးတိုးမညီမျှခြင်းအပေါ် ဖဲကြိုးပြာလှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်ရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်တွင် သတင်းစာရှင်း
Blue Ribbon Campaign ပြုလုပ်ရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နည်းပညာတက္ကသိုလ်နှင့် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တို့မှ တာဝန်ရှိသူများ ပူးပေါင်းပြီး စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲကို ရန်ကုန်မြို့၊ MJN ရုံးခန်း၌ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၃၁ ရက်၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
“အဓိက,ကတော့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ဦးစီးဌာနအသီးသီးက ရာထူးတိုးမှုတွေ ညီညွတ်မျှတမှုမရှိခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေ သိရှိစေဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနရဲ့ နည်းပညာတက္ကသိုလ်နဲ့ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွေမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိတဲ့ ဆရာ ဆရာမတွေက ရာထူးတိုး လုပ်သက်ကျော်လွန်နေပြီ ဖြစ်ပေမယ့် အခုထိ ရာထူးတိုးခံစားခွင့် မရှိကြရပါဘူး။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုတည်းရဲ့ လက်အောက်မှာ ရှိပေမယ့်လည်း ဦးစီးဌာနအသီးသီးရဲ့ ချမှတ်ထားတဲ့ ရာထူးတိုးမူဝါဒတွေကလည်း မတူညီကြပါဘူး” ဟု နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မှော်ဘီ) သုတနည်းပညာဌာန၊ လက်ထောက်ကထိက ဒေါ်သူသူအောင်က ပြောကြားသည်။
ဥပဒေအရ ရာထူးတိုးရမည်ထက် နှစ်များစွာ ကျော်လွန်နေခြင်း၊ ၀န်ကြီးဌာနတစ်ခုတည်းဖြစ်သော်လည်း ရာထူးတိုးမူဝါဒမတူညီ၍ မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေခြင်း၊ အလုပ်ခေါ်စဉ်ကတည်းက ရာထူးအတိုင်း နှစ်ကာလကြာမြင့်စွာ ရာထူးတိုးမပေးခြင်း (၁၆၅၀၀၀ နှင့် ၁၈၀၀၀၀ စကေးများ)၊ ရာထူးတိုးစာမေးပွဲကို မဖြေရဘဲ ရာထူးတိုးထားသူများ၊ ယခုအစိုးရလက်ထက်မှာပင် ရှိနေသော်လည်း ဦးစီးဌာနအတူတူချင်းမှာပင် ရာထူးတိုး စာမေးပွဲစစ်ရန် ကြိုးပမ်းနေခြင်းနှင့် နစ်နာသောဝန်ထမ်းများအတွက် တရားဝင် တောင်းပန်ခြင်း အပါအ၀င် အခြားဖြေရှင်းမှုများ ပြုလုပ်ပေးရန် တောင်းဆိုထားကြောင်း သိရသည်။
နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မန္တလေး) တွင် ဖဲကြိုးပြာ လှုပ်ရှားမှုစတင်
နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မန္တလေး) တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဆရာ ဆရာမများ ရာထူးတိုးမျှတမှုများရှိစေရန်၊ နစ်နာမှုများ မရှိစေရန်အတွက် ဖဲကြိုးပြာလှုပ်ရှားမှုကို ဆရာများ သမဂ္ဂနည်းပညာတက္ကသိုလ် (မန္တလေး) မှ ဦးဆောင်ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၃၁ ရက်မှစ၍ ဖဲကြိုးပြာလှုပ်ရှားမှု စတင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
“နည်းပညာနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ လေ့ကျင့်ရေးဌာနဘက်မှာက ပြီးတဲ့တဲ့လပိုင်း ရက်ပိုင်းအတွင်းက ရာထူးတိုးအမိန့်တွေ ထွက်သွားတယ်။ အဲဒီဘက်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဆရာ ဆရာမတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွေမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဆရာ ဆရာမတွေက လုပ်သက်လည်းတူတယ်။ ဘွဲ့တွေလည်း တူတယ်။ တချို့ဆိုရင် ဒီမှာပိုပြီး လုပ်သက်နဲ့ ဘွဲ့တွေပိုများတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဟိုဘက်မှာ ရာထူးတိုးတွေခေါ်ပြီး ဒီမှာက ရာထူးတိုး မထွက်ဘူး” ဟု ဆရာ ဆရာမများသမဂ္ဂမှ ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်ကျော်က ပြောကြားသည်။
နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်၊ ဆေးနှီးနွှယ်တက္ကသိုလ်များမှ ဆရာ ဆရာမများထံမှ ရာထူးတိုးနစ်နာမှုများကို စစ်တမ်းများ ကောက်ယူခဲ့ကြောင်း၊ တစ်ပတ်ကြာ ဖဲကြိုးပြာများ တပ်ဆင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ပြင် ဆန္ဒပြုလက်မှတ်များဖြင့် ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မျှတမှုရှိသည့် ရာထူးတိုးမူဝါဒ လမ်းစဉ်ချမှတ်မပေးလျှင် နေပြည်တော်အထိ သွားရောက် ဆန္ဒပြမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဟင်္သာတနည်းပညာတက္ကသိုလ် ဆရာ ဆရာမများ ဖဲကြိုးပြာလှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်
ရာထူးတိုးမမျှတမှုအပေါ် မကျေနပ်သဖြင့် ဟင်္သာတနည်းပညာတက္ကသိုလ်ဆရာ၊ ဆရာမများက ဇူလိုင် ၃၁ ရက်တွင် ဖဲကြိုးပြာ လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဖဲကြိုးပြာလှုပ်ရှားမှုကို ဟင်္သာတနည်းပညာတက္ကသိုလ်၌ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဆရာ ဆရာမ ၆၀ ကျော် ပါဝင်ခဲ့သည်။
“ရာထူးတိုးမူတွေကလည်း တိကျခိုင်မာမှု မရှိဘူး။ ၀န်ကြီးတစ်ယောက်လာရင် တစ်မျိုးပြောင်းတယ်။ အဲဒီလိုအခြေအနေတွေ မဖြစ်ချင်တော့တဲ့အတွက် တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွေ၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွေ စုပေါင်းပြီး ဒီနေ့ကစပြီး ဖဲကြိုးပြာ လှုပ်ရှားမှုကို စပါတယ်” ဟု ဟင်္သာတနည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ ကထိက ဦးသန့်ဇင်ဦးက ပြောကြားသည်။
“ကျွန်မဆိုရင် သရုပ်ပြရာထူးကို လုပ်သက် ရှစ်နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ ဒီအချိန်ထိ သရုပ်ပြရာထူးပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ကျွန်မတို့လိုမျိုး နစ်နာခဲ့တဲ့ ဆရာ ဆရာမတွေ အများစု လုပ်သက် ခုနစ်နှစ်၊ ရှစ်နှစ်၊ ၁၀ နှစ်ကျော်အထိ ၀န်ထမ်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်” ဟု ဟင်္သာတနည်းပညာတက္ကသိုလ် သင်္ချာဌာနမှ သရုပ်ပြဆရာမ ဒေါ်ခိုင်ကြည်ဇာဆွေက ပြောကြားသည်။
ပခုက္ကူနည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ ဆရာ ဆရာမများ ဖဲကြိုးပြာလှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်
ပခုက္ကူနည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ ဆရာ ဆရာမများ ၀န်ကြီးဌာနအတွင်း ရာထူးတိုးမမျှတမှုအပေါ် မကျေနပ်သဖြင့် ဖဲကြိုးပြာလှုပ်ရှားမှုအား ယခု ဇူလိုင် ၃၁ ရက် နံနက်က ပခုက္ကူ နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်တွင်ရှိသည့် ဦးစီးဌာန နှစ်ခုကြား ရာထူးတိုးမူဝါဒ မညီမျှခြင်း၊ ၀န်ကြီးဌာနတစ်ခုအတွင်း ရာထူးတိုး မူဝါဒ နှစ်မျိုးရှိနေခြင်းနှင့် ရာထူးတိုးမူဝါဒ တစ်မျိုးတည်းရှိရေးတို့အတွက် ဖဲကြိုးပြာလှုပ်ရှားမှု လုပ်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဦးဆောင် ဆရာ ဆရာများထံမှ သိရသည်။
“ရာထူးတိုးမျှတရေး၊ အပြောင်းအရွှေ့မူ ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ်ရေး။ နောက်တစ်ချက်က သက်ဆိုင်ရာ ရာထူးအဆင့်အလိုက် အဆင့်မြင့်ပညာမှာဆိုရင် ၀ိဇ္ဇာ၊ သိပ္ပံရှိနေတဲ့ Facility ကွန်ပြူတာနည်းပညာမှာ ရှိနေတဲ့ Facility မျှတရေး သက်ဆိုင်ရာ ရာထူးအလိုက် ခံစားခွင့်မျှတစွာရရှိရေး တောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပခုက္ကူနည်းပညာ တက္ကသိုလ်မှ ဦးရဲလွင် (ကထိက၊ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာန) က ပြောကြားသည်။
ရာထူးတိုးမမျှတမှုနှင့် ပက်သက်သည့် ဖဲကြိုးပြာလှုပ်ရှားမှုအား နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တို့တွင် ဇူလိုင် ၃၁ ရက်မှ သြဂုတ် ၄ ရက်အထိ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး တောင်းဆိုချက်များအား ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိပါက လှုပ်ရှားမှုအား ထပ်တိုးလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးဆောင်ဆရာ ဆရာမများထံမှ သိရသည်။
ဖဲကြိုးပြာလှုပ်ရှားမှု ပြည်နည်းပညာတက္ကသိုလ် ဆရာ ဆရာမများ ပြုလုပ်
ရာထူးတိုးမူဝါဒများမျှတရေး ဖဲကြိုးပြာလှုပ်ရှားမှုကို ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်ပိုင်း) ပြည်မြို့ နည်းပညာတက္ကသိုလ် ဆရာ ဆရာမများက ပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
“မျှတတဲ့ မူဝါဒတွေရအောင်ဆိုပြီး ဒီဖဲကြိုးပြာ လှုပ်ရှားမှုကိုလုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြည်နည်းပညာတက္ကသိုလ် (IT) ဌာန လက်ထောက်ကတိက ဦးရဲမင်းသိန်းက ဆိုသည်။
“ကျွန်မတို့တွေက နစ်နာနေတာက နည်းနည်းကြာပြီ။ သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း အရင်တုန်းက စိတ်ရှည်လက်ရှည် စောင့်နေခဲ့တာပါ။ ဒါလေးကို သိစေချင်တယ်။ ရာထူးတိုးဖို့ပေါ့။ ရာထူးတိုးချင်တာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ စောင့်နေရင်းနဲ့ ကြာခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ရာထူးတိုးဖို့ တစ်ခုတည်းနဲ့ အလုပ်လုပ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ တခြားသော အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေနိုင်ငံတော်မှာရှိတယ် ဆိုတာလည်း နားလည်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ပုဂ္ဂလိကကိစ္စကိုပဲ ဦးတည်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း အားလုံးလည်းသိကြမှာပါ နည်းနည်းမမျှတတာလေးတွေရှိတယ်။ သည်းမခံနိုင်တော့ဘူး။ ကျွန်မတို့နစ်နာနေတဲ့ အပိုင်းလေးတွေကို သိစေချင်တာပါ” ဟု ပြည်နည်း ပညာတက္ကသိုလ် (IT) ဌာနလက်ထောက် ကထိက ဒေါက်တာနေခြည်ထွန်းက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ လှုပ်ရှားမှုများကို အခြားမြို့ကြီးများရှိ နည်းပညာတက္ကသိုလ်များ ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်များတွင်လည်း တစ်ပြိုင်နက်တည်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
တောင်ကြီးမြို့နယ် အေးသာယာ နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ ဆရာ ဆရာမများ ဖဲကြိုးပြာကမ်ပိန်း ပြုလုပ်
ရာထူးတိုးမှု တရားမျှတရန် တောင်ကြီးမြို့နယ် အေးသာယာမြို့ နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ ဆရာ ဆရာမများအားလုံး စုပေါင်းပြီး အပြာရောင်ဖဲကြိုးကမ်ပိန်းလှုပ်ရှားမှုကို ဇူလိုင် ၃၁ ရက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
“အရင်က သိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာဦးစီးဌာနမှ အတူတူပဲဆိုတော့ဘက်တူတွေ အကုန်တူတူ တိုးခဲ့တယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ ပညာရေးဦးစီးဌာနအောက်ကို ဦးစီးဌာနချင်းပေါင်းလိုက်ပြီး နည်းပညာဦးစီးဌာနက ပညာရေးဦးစီးဌာန လက်အောက်ကို ရောက်သွားပြီးဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ရာထူးတိုးထွက်တော့ ပညာရေးက သူ့မူအတိုင်းထွက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့က နည်းပညာဆိုပြီး ကိုယ်တွေကျန်ခဲ့တော့ နောက်မှတိုးပေးမယ်ထင်ပြီး နည်းပညာလက်အောက်ရှိတဲ့လူတွေ ရာထူးတိုးသွားတယ်။ ဟိုဘက်လည်းမပါ ဒီဘက်လည်းမပါဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ရာထူးတိုးချင်တာ မဟုတ်ဘူး။ ဘက်တူသူများ တူတူကိုယ်တွေရချင်တာကို ရစေချင်တာ” ဟု သရုပ်ပြဆရာမ ဒေါ်ဇင်မာမင်း ဆိုသည်။
“သရုပ်ပြ ဆရာမလေးဆိုရင် သုံးဘာသာလောက်တော့ ပေးရတယ်။ ဘာသာလည်း အများကြီး သင်ရတယ်။ အလုပ်ကလည်း အရမ်းလုပ်ရတယ်။ သတ်မှတ်လုပ်သက်လည်း ပြည့်ပြီ။ ရာထူးလည်း မတိုးဘူးဆိုတော့ ဆရာမကလေးတွေ စိတ်ထဲဘယ်လိုခံစားမလဲပေါ့။ မိသားစုလို သဘောထားတော့ ဒီလို မဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့။ ဟိုမှာဆိုရင် နှစ်သုတ်၊ သုံးသုတ်လောက် ခေါ်သွားချိန်မှာ ဒီဘက်က ဘာမှကိုမရသေးတာ မဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့” ဟု Ph.D Mechanical ဌာနမှ ပါမောက္ခဒေါက်တာ နန်းဝိုးစောက ပြောကြားသည်။
နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ပုသိမ်) တွင် ရာထူးတိုးမျှတရေး အပြာရောင်ဖဲပြား လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်မြို့ရှိ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ပုသိမ်) မှ ဆရာ ဆရာမများမှ ရာထူးတိုးမျှတရေး အပြာရောင်ဖဲပြား လှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ် ဇူလိုင် ၃၁ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ရာထူးတိုး တရားမျှတရေးမရှိခဲ့လို့ ရာထူးတိုးတရားမျှတအောင် ဒီ Campaign လုပ်ရတာပါ။ ဆက်လက်ပြီးတော့ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ပုသိမ်) တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ ကျောင်း ၃၃ ကျောင်းမှ ဆရာ ဆရာမတွေ ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှ ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားခွင့်တွေရရှိဖို့ ခိုင်မာတဲ့မူဝါဒတွေထွက်ဖို့ အကုန်လုံးညှိနှိုင်းပြီး ဆောင်ရွက်ရမှာပါ” ဟု နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ပုသိမ်) တွင်မှ မော်ကွန်းထိန်း ကထိက ဒေါက်တာကျော်မျိုးဝင်းက ဆိုသည်။
နည်ပညာ တက္ကသိုလ် (ပုသိမ်) တွင် သရုပ်ပြ ဆရာ ဆရာမ ၅၈ ဦးနှင့် လက်ထောက် ကထိက ၃၂ ဦး ရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsLeaveaComment on ရာထူးတိုး မမျှတဟုဆိုကာ နိုင်ငံအနှံ့ရှိ နည်းပညာတက္ကသိုလ်နှင့် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ဆရာ၊ ဆရာမများ ဖဲကြိုးပြာလှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်
ရာသီတုပ်ကွေး H1N1 ဖြစ်ပွားနေချိန်တွင် ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး H5N1 ရုတ်တရက်ဖြစ်သွားပါက လုပ်ရကိုင်ရခက်ခဲသည့် အခြေအနေဖြစ်နိုင်ခြင်းကြောင့် H5N1 မဖြစ်မီရောဂါထိန်းချုပ်မှုမှာ အရေးကြီးကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးပြောကြား
H5N1 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့သည့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ထားဝယ်မြို့နယ်မှ ကြက်ခြံကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- ဖြိုးဇင်)
ရာသီတုပ်ကွေး H1N1 ဖြစ်ပွားနေချိန်တွင် ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး H5N1 ရုတ်တရက်ဖြစ်သွားပါက လုပ်ရကိုင်ရခက်ခဲသည့် အခြေအနေဖြစ်နိုင်ခြင်းကြောင့် H5N1 မဖြစ်မီ ရောဂါထိန်းချုပ်မှုမှာ အရေးကြီးကြောင်း ဇူလိုင် ၃၀ ရက်က ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ‘ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါ Seasonal Influenza A (H1N1) pdm 2009 ဖြစ်ပွားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးက အဖွင့်မိန့်ခွန်းတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။
“H1N1 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုက ပထမပိုင်းမှာတော့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိရှိပေမယ့် အခု ၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကို ကျသွားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် ၁၄ ရုံမှာ ဆေးရုံတွေရဲ့ လူနာဆေးရုံတက်ရောက်မှု အခြေအနေ အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ နှုန်းကဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတော့ ဇူလိုင် ၁ ရက်ကနေ ၂၈ ရက်အထိ ၁၁ ကနေ ၃၆ ယောက်ရှိပါတယ်။ အများဆုံးတက်တာ ၃၆ ယောက်၊ ပျမ်းမျှကတော့ ၁၂ ဖြစ်ပါတယ်။ အမြင့်ဆုံးနှုန်းမှာက ၃၁ ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်တဲ့အခါ အခြေအနေကမဆိုးသေးဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကတည်းက နည်းနည်းလေးတန့်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သက်သာမလား၊ ကျသွားမလားဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ ဆက်ကြည့်နေပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒါထက်ပိုစိုးရိမ်တာက H5N1 ပါ။ မရမ်းကုန်းမှာ မနေ့ကတွေ့တယ်။ ထားဝယ်မှာလည်း တွေ့နေတယ်။ ဘာလို့စိုးရိမ်သလဲဆိုတော့ စီးပွားရေးထိခိုက်မှုတွေရှိတဲ့အပြင် သေဆုံးမှုနှုန်းကလည်း တော်တော်များပါတယ်။ H5N1 ကတော့ မျက်ခြည်ပြတ်လို့မရပါဘူး။ H5N1 ကဗြုန်းခနဲဖြစ်သွားရင် ကျွန်တော်တို့လုပ်ရကိုင်ရ တော်တော်ခက်မယ့် အခြေအနေပါ။ ဒီတော့ H5N1 ကိုမဖြစ်ခင် Containment (ထိန်းချုပ်မှု) အပိုင်းက အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်” ဟုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဒေါက်တာမြင့်ထွေးက ပြောကြားသည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်မှစပြီး အာရှနိုင်ငံများအပါအ၀င် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအချို့တွင် နှစ်စဉ်ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး (H5N1) ရောဂါဖြစ်ပွားမှုရှိလာပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအထိ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ မှတ်တမ်းများအရ H5N1 လူကိုကူးစက်မှုရှိကြောင်း သတင်းပေးပို့မှုရှိခဲ့သည့် နိုင်ငံပေါင်း ၁၆ နိုင်ငံတွင် ကူးစက်ခံရမှု ၈၅၆ ကြိမ်၊ လူသေဆုံးမှု ၄၅၂ ဦးရှိခဲ့ကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ကြေညာထားသည်။
လက်ရှိထားဝယ်မြို့၌ H5N1 ဖြစ်ပွားမှုများရှိနေကြောင်း၊ ထားဝယ်မြို့ ၀ဲကျွန်းထိန်သစ်ရပ်ကွက်ရှိ အမှတ် (၄) အထက်တန်းကျောင်းအနီးမှ ဥစားကြက်ကောင်ရေ ၅၀၀၀ မွေးမြူထားသော ကြက်မွေးခြံ၌ ဇူလိုင် ၁၆ ရက်မှ စတင်ကာကြက်ကောင်ရေ ထောင်ချီသေဆုံးပြီးနောက် ကြက်အသေကောင်နမူနာများကို ရန်ကုန်မြို့၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ ပေးပို့စစ်ဆေးခဲ့ရာ အပြင်းစားကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ H5N1 တွေ့ရှိကြောင်း ဇူလိုင် ၂၅ ရက်က အတည်ပြုခဲ့ကြောင်းနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ နေအိမ်တစ်အိမ်မှ ကြက်များသေဆုံးသဖြင့် စစ်ဆေးခဲ့ရာ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး H5N1 တွေ့ရှိကြောင်း ဇူလိုင်၂၈ ရက်က မရမ်းကုန်းမြို့မရဲစခန်းက အတည်ပြုခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး H5N1 ကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်က စတင်တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ် မတ်နှင့်ဧပြီလတွင် မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်း၌လည်းကောင်း၊၂၀၀၇ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနှင့် အောက်တိုဘာလတွင် ရန်ကုန်၊ မွန်၊ ပဲခူး၌လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၌ပင် ဒုတိယအကြိမ်တွေ့ရှိမှုကို နိုဝင်ဘာနှင့် ဒီဇင်ဘာလတွင် ရှမ်းပြည်နယ်၌ ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီနှင့် မတ်လတွင် ရန်ကုန်နှင့်စစ်ကိုင်း၌လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ဇန်န၀ါရီနှင့် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ရခိုင်နှင့်စစ်ကိုင်း၌လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနှင့် မတ်လတွင် စစ်ကိုင်းနှင့် ပဲခူး၌လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စစ်ကိုင်း၌လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ဧပြီလတွင် စစ်ကိုင်း၌လည်းကောင်း အသီးသီးဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းနှင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် နောက်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုဖြစ်စဉ်တွင် H5N1 အပြင် H9N2 ခေါ် အပျော့စား ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ ပူးတွဲဖြစ်ပွားမှုကို တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါသည် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတစ်မျိုးကြောင့် ကြက်၊ ငှက်များတွင် လျင်မြန်စွာကူးစက်၍ ကြက်အများအပြားသေဆုံးပြီး လူကိုပါကူးစက်စေသည့် ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်း၊ ရောဂါမှာ အပြင်းစားနှင့် အပျော့စားဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိကြောင်း၊ ရောဂါပြင်းထန်မှုအလိုက် ကြက်သေဆုံးမှု၊ လူသို့ကူးစက်နိုင်ခြေပိုများပြီး ယခင်က H5N1 ရောဂါမှာပြင်းထန်ပြီး ယခုနောက်ပိုင်း၌ H5N1 အပြင် H5N2၊ H5N6၊ H5N8၊ H10N8 များလည်းပါဝင်လာကြောင်းနှင့် H7N9၊ H9N2 များမှာရောဂါအပျော့စားတွင် ပါဝင်သော်လည်း ယခုအခါ H7N9 မှာ အပြင်းစားအဆင့်သို့ မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲလာခြင်းများ တွေ့ရကြောင်း မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
“တုပ်ကွေးပိုးတွေ မျိုးမတူတာတွေ ပေါင်းသွားနိုင်သလားဆိုတော့ တကယ်တော့ တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်တွေက သူတို့လည်းမျိုးပွားတာပေါ့။ မျိုးပွားတဲ့အခါ မျိုးစိတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုက အနည်းနဲ့အများ ပြောင်းသွားနိုင်တယ်။ နောက်တစ်ခုက သူတို့အချင်းချင်း ပေါက်ပွားလာတဲ့အခါ ပိုပြီးအစွမ်းပြင်းတဲ့ပိုးတွေ ထူးထူးခြားခြား ထွက်လာတာမျိုးတော့ ရှိပါတယ်။ မျိုးမတူတာ ပေါင်းသလားဆိုတော့ ပေါင်းတော့ပေါင်းတယ်။ တိုက်ရိုက်ပေါင်းလို့တော့မရဘူး။ ကြားခံသူတို့ကို ပေါင်းစပ်ပေးမယ့် သတ္တ၀ါတစ်မျိုးတော့ရှိရမယ်။ ဥပမာ- ၀က်ဆိုပါစို့။ လူမှာဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ တုပ်ကွေး၊ ကြက်ငှက်မှာရှိတဲ့ တုပ်ကွေးပိုး သူတို့က ၀က်ထဲကိုဝင်လို့ရတယ်။ ၀က်က အဲဒီနှစ်ခုလုံးကို လက်ခံလို့ရတယ်ဆိုပါစို့။ ၀က်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမတူတာ နှစ်မျိုးလောက်ဝင်သွားမယ်။ ၀င်သွားပြီး ရင်သူ့ထဲမှာတစ်ခါ မျိုးစိတ်ပြန်ပြန့်ပွားမယ်။ ၀က်ကလည်း မသေဘူး။ သူ့ဆီကနေ ပြန်ထွက်လာတဲ့ မျိုးစိတ်ကအသစ် ပေါ်ပေါက်နိုင်တာပေါ့။ လောလောဆယ် ရာသီတုပ်ကွေးကလည်း ဖြစ်နေတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးကလည်း ဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့နှစ်ခုက လေထဲမှာတော့ ပေါင်းလို့မရဘူး။ လွယ်လွယ်ကူကူ အဲဒီလိုတော့ ပေါင်းလို့မဖြစ်ပါဘူး။ ကြားခံသတ္တ၀ါလိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဝင်လိုက်တိုင်းလည်း ဖြစ်မယ်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ ကံသေကာမတော့ ပြောလို့မရဘူး” ဟု ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) ရန်ကုန်၊ အဆုတ်နှင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ဆေးပညာဌာန၊ ပါမောက္ခ/ဌာနမှူး ဒေါက်တာဝင်းနိုင်က ဇူလိုင် ၃၀ ရက်က H1N1 ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပြီး နောက်ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားသည်။
ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ BSL II ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးခုဖြစ်သည့် ရန်ကုန်တိရစ္ဆာန်ရောဂါ ရှာဖွေရေးဓာတ်ခွဲခန်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စဉ့်ကိုင်ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် နေပြည်တော် ရွှေမြို့ဓာတ်ခွဲခန်းများမှ H5,H7,H9 ဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားများကို အမြန်ခွဲခြားစစ်ဆေးပေးနေကြောင်း သိရသည်။
Writer – အိသဉ္ဇာကျော်
Posted in NewsLeaveaComment on ရာသီတုပ်ကွေး H1N1 ဖြစ်ပွားနေချိန်တွင် ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး H5N1 ရုတ်တရက်ဖြစ်သွားပါက လုပ်ရကိုင်ရခက်ခဲသည့် အခြေအနေဖြစ်နိုင်ခြင်းကြောင့် H5N1 မဖြစ်မီရောဂါထိန်းချုပ်မှုမှာ အရေးကြီးကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးပြောကြား
ယခင်အစိုးရလက်ထက်က စာရင်းပျောက်ခဲ့သည့် မကွေးတိုင်းရှိ ရေနံလက်ယက်တွင်းများမှ ရရှိခဲ့သည့် ကျပ်သန်း ၇၀၀၀ ကျော်အနက် ပြန်ပေးရမည့် ကျပ်သန်း ၃၀၀၀ ကျော်အတွက် နောက်ဆုံးအရစ်ပေးသွင်း
ယခင်အစိုးရလက်ထက်က စာရင်းပျောက်ခဲ့သည့် မကွေးတိုင်းရှိ ရေနံလက်ယက်တွင်းများမှ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ရန်ပုံငွေ ကျပ်သန်း ၇၀၀၀ ကျော်အနက် ပြန်လည်ပေးသွင်းရန် ညွှန်ကြားထားသည့် ကျပ်သန်း ၃၀၀၀ ကျော် အတွက် နောက်ဆုံးအရစ်ပေးသွင်းငွေ ကျပ်သိန်း ၅၇၀ ကိုဇူလိုင် ၃၁ ရက်က ပေးသွင်းခဲ့ကြောင်း မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုထံမှ သိရသည်။
ယခင်အစိုးရလက်ထက်က မကွေးတိုင်းအတွင်း ရေနံမှော်များမှ ရရှိခဲ့ပြီး စာရင်းပျောက်နေသည့် ငွေကျပ် ၂ ဒသမ ၈ ဘီလျံကိစ္စကို ပွင့်ဖြူမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းထွန်းက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ မေးခွန်းမေးတင်ပြခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းမေးခွန်းအရ ပြည်ထောင်စုအစိုးရက စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ရာ ယခင်အစိုးရလက်ထက်က မကွေးတိုင်းအတွင်း ရေနံလက်ယက်တွင်းများမှ ရရှိခဲ့သော ငွေပေါင်း ကျပ်သန်း ၇၀၀၀ ကျော်အထိရှိခဲ့သည်ဟု ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းငွေများအနက် ငွေကျပ်သန်း ၃၀၀၀ ကျော်ကို မကွေးတိုင်းပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီနှင့် အသင်းအဖွဲ့ နှစ်ခုအတွက် အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း မကွေးတိုင်း အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ထံမှ သိရသည်။
ထိုသို့ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရ ယင်းငွေနှင့် ပစ္စည်းများအား လက်ရှိတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့သို့ ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက ဧပြီ ၈ ရက်က မကွေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့နှင့် ပြည်ထဲရေးဌာနသို့ အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ခဲ့သည်။
ယင်းအကြောင်းကြားစာကို လက်ရှိမကွေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့က ယခင်ဝန်ကြီးချုပ် ဟောင်းဦးဘုန်းမော်ရွှေထံ ဧပြီ ၂၆ ရက်က အကြောင်းကြားခဲ့ရာ ၎င်းက ဧပြီ ၂၇ ရက် ရက်စွဲဖြင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အကြောင်းကြားစာပါငွေနှင့် ပစ္စည်းများအား အရစ်ကျပေးသွင်းပါမည်ဟု အကြောင်းပြန်ခဲ့သည်။
ယင်းသို့ အကြောင်းပြန်သည့်အတိုင်း အရစ်ကျပြန်လည် ပေးသွင်းခဲ့ပြီး ဇူလိုင် ၃၁ ရက်က နောက်ဆုံးအရစ်ကျန်ငွေကို ပေးသွင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ဒီနေ့ ကျပ်ငွေသန်းပေါင်း ၅၇၀ ထပ်ပေးသွားတယ်။ ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် ပြည်ထောင်စုက ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲ ကျပ်ငွေသန်းပေါင်း ၃၂၇၀ (သိန်းပေါင်း ၃၂၇၀၀) ကို အကုန်လုံး အကျေပေးသွားပြီ။ ယန္တရားတွေလည်း ပေးသွားပြီ။ ကျန်တဲ့ ကျပ်သန်း ၄၀၀၀ ကတော့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်၊ တာဝန်ပေးချက်အရ တိုင်းဒေသကြီး စာရင်းစစ်ချုပ်က ဒါတွေကို ဘယ်လိုသုံးစွဲတယ်ဆိုတာကို စုံစမ်းစစ်ဆေး မေးမြန်းနေတယ်လို့ ကျွန်တော်သိရတယ်” ဟု မကွေးတိုင်း ဒေါက်တာဦးအောင်မိုးညိုက ပြောကြားသည်။
Posted in NewsLeaveaComment on ယခင်အစိုးရလက်ထက်က စာရင်းပျောက်ခဲ့သည့် မကွေးတိုင်းရှိ ရေနံလက်ယက်တွင်းများမှ ရရှိခဲ့သည့် ကျပ်သန်း ၇၀၀၀ ကျော်အနက် ပြန်ပေးရမည့် ကျပ်သန်း ၃၀၀၀ ကျော်အတွက် နောက်ဆုံးအရစ်ပေးသွင်း
မေယုတောင်တန်းတွင် တွေ့ရသည့် အကြမ်းဖက်သမားများ ခိုအောင်းသည်ဟု ယူဆရသော တဲများတွင် နိုင်ငံတကာ ကူညီထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ တွေ့ရပြီး UN လက်အောက်ခံ WFP အပါအ၀င် NGO၊ INGO အဖွဲ့များမှ တိုက်ရိုက် ပံ့ပိုးနေသလားဆိုသည်ကိုပြောရန် ခက်ခဲကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ ရှင်းလင်း
မေယုတောင်တန်းတွင် တွေ့ရသည့် ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားများ ခိုအောင်းသည်ဟု ယူဆရသောတဲများတွင် နိုင်ငံတကာ ကူညီထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ တွေ့ရပြီး UN လက်အောက်ခံ WFP အပါအ၀င် NGO၊ INGO အဖွဲ့များမှ တိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးနေသလားဆိုသည်ကို ပြောရန်ခက်ခဲကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့က သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားသည်။
မေယုတောအတွင်း ခရုရှာသွားရင်း ပျောက်ဆုံးနေသူအား လုံခြုံရေးတပ်မတော် စစ်ကြောင်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ကျေးရွာသားများ ပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့များသည် ဇူလိုင် ၃၀ ရက်က မေယုတောအတွင်း လိုက်လံရှာဖွေရာ ပျောက်ဆုံးနေသူ၏ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း အချို့နှင့် ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားများ ဆောက်လုပ်ထားသည်ဟု ယူဆရသော ဆောက်လုပ်ဆဲတဲများကို နေရာသုံးခုတွင် တွေ့ရှိခဲ့ရပြီး အဆိုပါတဲများတွင် တွေ့ရှိခဲ့ရသည့် ရိက္ခာနှင့် အခြားပစ္စည်းများမှာ WFP မှ ထောက်ပံ့သည့် High Energy Biscuits မုန့်ထုပ်များ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ ပြည်သူကို ထောက်ပံ့ထားသည့် ပစ္စည်းများဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း သိရသည်။
“မနေ့က မေယုတောင်ထဲမှာ တွေ့ရတဲ့ ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ ခိုလှုံရာတဲတွေမှာ တွေ့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာ နိုင်ငံတကာက လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ကူညီထောက်ပံ့ရေး ပစ္စည်းတွဖြစ်နေတယ်။ ဒီနိုင်ငံတကာက ထောက်ပံ့ရေးစ္စည်းတွေဟာ မရောက်သင့်တဲ့ နေရာကိုရောက်နေတယ်။ သူတို့က အကြောင်းပြချက် အမျိုးမျိုးပေးနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ လူသားချင်းစာနာရေးပစ္စည်းတွေဟာ ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားတွေ လက်ထဲကို ရောက်နေတယ်ဆိုတာကို လုံးဝငြင်းလို့ မရဘူးဆိုတာတော့ သေချာတယ်လို့ ပြောချင်တယ်။ ဒီပစ္စည်းတွေ အကြမ်းဖက်သမားတွေဆီကို ဘယ်လိုရောက်ရှိသွားသလဲဆိုတာကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေဖြင့် အသေအချာ စိစစ် ဖော်ထုတ်ပေးသင့်တယ်” ဟု စစ်တွေဒေသခံ ဦးသန်းထွန်းက ဆိုသည်။
တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများက ဇူလိုင် ၃၀ ရက်က သွားရောက်ရှင်းလင်းရာတွင် ဆန်၊ ဆီ၊ မိုးကာ၊ ကော်ဖီမစ်၊ ဘီစကွတ်၊ ဒန်အိုး၊ နိုင်လွန်ကြိုးများကို တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဖုန်းတင့်က ပြောကြားသည်။
“ကျွန်တော်တို့ စစ်ကြောင်းက ဇူလိုင် ၃၀ ရက်က သွားရောက်ရှင်းလင်းတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ မြေပြင်မှာ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကို စစ်သည်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကို ဓာတ်ပုံအားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်ရာဌာနကို တင်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာဆိုရင် ခုနက ပြောသလို ဆန်ငါးအိတ်၊ ဆီငါးပိဿာ၊ မိုးကာ အပြာအသစ် တစ်လိပ်၊ ကော်ဖီမစ်၊ ဘီစကွတ်၊ ဒန်အိုး၊ နိုင်လွန်ကြိုး ဒါတွေက အစုံရှိပါတယ်။ ဒီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကို နိုင်ငံတကာ NGO၊ INGO အဖွဲ့တွေက ကူညီထောက်ပံ့နေသလား၊ တိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးနေသလား။ ဒါကတော့ ပြောရအင်မတန် ခက်ပါတယ်” ဟု လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဖုန်းတင့်က ပြောကြားသည်။
မေယုတောအတွင်းမှ တွေ့ရသည့် ယာယီတဲများတွင် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး အဆိုပါ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများကို ပြည်သူများက ထပ်မံရောင်းချခဲ့သဖြင့် တောတွင်းသို့ ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်မောင်ဆွေက သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
“အခုဖြစ်စဉ်မှာလည်း ထောက်ပံ့တဲ့ပစ္စည်းတွေ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်တာကတော့ရရှိတဲ့ ရိက္ခာတွေအားလုံးဟာ တချို့တွေကလည်း အကုန်သုံးစွဲတယ်။ တချို့တွေကလည်း ပိုလျှံတဲ့ဥစ္စာကို ရောင်းစားတယ်။ ရောင်းစားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုပဲ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် တောတွင်းကို ရောက်ရှိသွားတယ်လို့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ တင်ပြလိုပါတယ်” ဟု ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်မောင်ဆွေက ပြောကြားသည်။
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် နယ်မြေ (၁၁) ချွတ်ပြင်ကျေးရွာနေ ဦးသန်းဌေး (၃၇ နှစ်) ပါ သုံးဦးသည် ဇူလိုင် ၂၇ ရက် နံနက် ၇ နာရီတွင် မေယုတောင်အနီး ခရုကောက်ရန် ထွက်ခွာသွားရာ ၎င်းတို့ သုံးဦးအနက် ဦးတင်မောင်ဝင်း (၃၇ နှစ်) ပါ နှစ်ဦးသည် ကျေးရွာသို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း၊ ခရုကောက်ရန် အတူသွားခဲ့သူ ဦးသန်းဌေးသည် ဇူလိုင်၂၈ ရက် နံနက် ၈ နာရီ ၄၅ မိနစ်အထိ အိမ်သို့ ပြန်ရောက်မလာ၍ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ကျေးရွာသားများ ပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့များသည် လိုက်လံ ရှာဖွေလျက်ရှိကြောင်း နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီမှ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ တစ်နှစ်တာအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ဇူလိုင် ၃၁ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ရုံးအစည်းအဝေးခန်းမတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Writter: သန်းလှိုင်၊ သားရွှေဦး
Posted in NewsLeaveaComment on မေယုတောင်တန်းတွင် တွေ့ရသည့် အကြမ်းဖက်သမားများ ခိုအောင်းသည်ဟု ယူဆရသော တဲများတွင် နိုင်ငံတကာ ကူညီထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ တွေ့ရပြီး UN လက်အောက်ခံ WFP အပါအ၀င် NGO၊ INGO အဖွဲ့များမှ တိုက်ရိုက် ပံ့ပိုးနေသလားဆိုသည်ကိုပြောရန် ခက်ခဲကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ ရှင်းလင်း
ပြည်​တွင်း၌ ဖြစ်​ပွား​နေသည့်​ ရာသီတုပ်​​ကွေး သတင်း​များ​ကြောင့်​ ထိုင်းနိုင်​ငံ မဲ​ဆောက်​ International Hospital တွင်​​ ဆေးပြတ်​လပ်​သည်​အထိ မြန်​မာနိုင်​ငံသားများ ကာကွယ်​​ဆေးသွား​ရောက်​ထိုးသူ များပြား​ကြောင်းသိရ
မဲဆောက်ဆေးရုံကြီး (ပုံကြီး) နှင့် ကာကွယ်ဆေး (ပုံသေး)
ပြည်​တွင်း၌ဖြစ်​ပွား​နေသည့်​ ရာသီတုပ်​​ကွေး H1N1 သတင်း​များ​ကြောင့်​ ထိုင်းနိုင်ငံ မဲ​ဆောက်​ International Hospital တွင်​​ဆေးပြတ်​လပ်​သည့်​အထိ မြန်​မာနိုင်​ငံသားများ ကာကွယ်​​ဆေးသွား​ရောက်​ထိုးသူ များပြား​လျက်​ရှိ​ကြောင်း သိရသည်။
မြန်​မာ-ထိုင်းနယ်​စပ်​ မြ၀တီမြို့တွင် နိုင်​ငံတကာ ၀င်​ထွက်​​ပေါက်​ဖြစ်​သည့်​ ချစ်​ကြည်​​ရေးတံတား၌ ဇူလိုင်​ ၂၇ ရက်​​မှစတင်​ကာ ကျန်​မာ​ရေးစစ်​​ဆေးမှု​ ဆောင်​ရွက်​ခဲ့ရာ ထူးခြားမှုတစ်​စုံတစ်​ရာ​ တွေ့ရှိမှုမရှိ​သော်​လည်း မြ၀တီမြို့​နေသူများမှာ မဲ​ဆောက်​မြို့သို့ သွား​ရောက်​ပြီး ကာကွယ်​​ဆေးထိုးကြရာ ​ဆေးပြတ်​လပ်​သည့်​အတွက်​ ​ငွေသွင်း၊​ ဖောင်​ဖြည့်​ကာ ပြန်​လာခဲ့ရ​ကြောင်း သိရသည်​။
“ဒီ​နေ့ H1N1 ကာကွယ်​​ဆေးထိုးမယ်​ဆိုပြီး မဲ​ဆောက်​ အင်​တာနယ်​ရှင်​နယ်​​ဆေးရုံးသို့ သွားပါတယ်​။ ​ဆေးပြတ်​လပ်​​နေလို့ စာရင်း​ပေး၊ ​ဖောင်​ဖြည့်​ငွေသွင်းပြီး ပြန်​လာခဲ့ရပါတယ်” ဟု မြ၀တီမြို့မှ​ ဒေသခံတစ်​ဦးက​ ပြောကြားသည်​။
မဲ​ဆောက်​မြို့ International Hospital ဆေးရုံကြီးတွင်​ Quadrivalent vaccine. Glaxosm ithkline, Dresden, Germany. ကထုတ်​သည့်​ Fluarix tetra 2017 ​ဆေးအမျိုးအစားထိုး​ပေးကြောင်းနှင့်​ ​ဆေးတစ်​လုံးလျှင်​ ထိုင်းဘတ်​​ငွေ ၅၀၀ ​ပေး​ဆောင်​ရပြီး။ ယခုအခါ ​ဆေးပြတ်​လပ်​လျက်​ရှိ​ကြောင်း သိရသည်။​
အဆိုပါ​ဆေးရုံ၌​ တာဝန်​ထမ်း​ဆောင်​​နေသူတစ်​ဦးက “ဇူလိုင်​ ၅ ရက်​​ထိတော့​ ဆေးတစ်​လုံးကို ဘတ်​ ၅၀၀ ဖြစ်​ပြီး ဇူလိုင်​ ၅ ရက်​​နောက်​ပိုင်း ရောက်​ရှိလာမည့်ကာကွယ်​​ဆေး​တွေက ဘတ်​ ၁၀၀၀ ၀န်းကျင်​ထိ ဖြစ်​လာနိုင်​ပါတယ်​” ဟုဆိုသည်​။
၎င်းကာကွယ်​​​ဆေးမှာ Influenza AH1N1.H3N2. နဲ့ Influenza B(Victoria)(Yamagata) Strain လေးမျိုးကို ကာကွယ်​မှုပေးနိုင်​သည်​ဟုလည်း ညွှန်းထားသည်​ဟုဆိုသည်​။ ယင်း International Hospital သို့ H1N1 ကျန်းမာ​ရေးဆိုင်​ရာ ကာကွယ်​ဆေးကို မြန်​မာနိုင်​ငံသားများသာ လာ​ရောက်​ထိုးကြ​သော်​လည်း ထိုင်းနိုင်​ငံသားတစ်​ဦးတစ်​ယောက်​မျှ လာ​ရောက်​​ဆေးထိုးခြင်းမရှိကြောင်း သိရသည်။
“ထိုင်း​တွေက ရာသီတုပ်​​ကွေးကာကွယ်​​ဆေးကို ဖြစ်​မှထိုးကြတာမဟုတ်​ဘဲ နှစ်​တိုင်း ကြိုတင်ကာကွယ်​​ဆေးထိုးထားကြတဲ့အတွက်​ ခုလိုအချိန်​မှာ သူတို့က​ရေးကြီးသုတ်​ပြာ ထိုးစရာမလို​တော့ပါဘူး” ဟု မဲ​ဆောက်​မြို့တွင်​​နေထိုင်​သည့်​ ကိုကြီးမန်းက ​ပြောကြားသည်။
Writer – ရွှေသိန်း (မြ၀တီ)
Posted in NewsLeaveaComment on ပြည်​တွင်း၌ ဖြစ်​ပွား​နေသည့်​ ရာသီတုပ်​​ကွေး သတင်း​များ​ကြောင့်​ ထိုင်းနိုင်​ငံ မဲ​ဆောက်​ International Hospital တွင်​​ ဆေးပြတ်​လပ်​သည်​အထိ မြန်​မာနိုင်​ငံသားများ ကာကွယ်​​ဆေးသွား​ရောက်​ထိုးသူ များပြား​ကြောင်းသိရ
မိတ္ထီလာမြို့ လူစည်ကားရာနေရာတွင် H1N1 ကာကွယ်ရန် တစ်ခါသုံးနှာခေါင်းစည်းများ ဝေငှ
မိတ္ထီလာမြို့ လူစည်ကားရာနေရာတွင် H1N1 ကာကွယ်ရန် တစ်ခါသုံးနှာခေါင်းစီးများ ဝေငှပေးခြင်းအစီအစဉ်ကို ဇူလိုင် ၃၁ ရက်မနက်ပိုင်းက ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“မိတ္ထီလာမြို့သူမြို့သားတွေ H1N1 ကကာကွယ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ငွေစုပြီး ဒီအစီအစဉ်လေး လုပ်ဖြစ်သွားတယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ဝင်တွေ၊ မြို့မိမြို့ဖတွေနဲ့ ဌာနဆိုင်ရာတွေ အားလုံးပါဝင်ပါတယ်။ မျက်နှာဖုံးစုစုပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်လောက်ဝေငှပေးခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒီအစီအစဉ်လေးလုပ်မယ်ဆိုတော့ ယာဉ်ထိန်းက ဒုရဲမှူးမြင့်စိုးတို့အဖွဲ့ကလည်း သူတို့လည်း ကူညီပေးမယ်ဆိုပြီး ပါဝင်လာပါတယ်” ဟု မိတ္ထီလာမှ ကိုမင်းသုဝဏ်ကဆိုသည်။ ဇူလိုင် ၂၉ ရက်မွန်းလွဲပိုင်းထိ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် သံသယရာသီတုပ်ကွေးရောဂါကြောင့် ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသနေရသူ ၁၃၈ ဦးရှိခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အနက် H1N1 ရောဂါကြောင့် လူနာစုစုပေါင်း ၄၁ ဦးတက်ရောက်ကုသနေရကာ သေဆုံးသူ ခုနှစ်ဦးရှိခဲ့ကြောင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်ချက်များအရသိရှိရပြီး ရန်ကုန်၊ ထားဝယ်မြို့ကြီးအချို့တွင် အဆိုပါရောဂါကြောင့် ဆေးရုံတက်ကုသရမှုများရှိနေကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ နှာခေါင်းစည်းဝေငှခြင်း အစီအစဉ်ကို ဇူလိုင် ၃၁ ရက် မနက်ကိုးနာရီခန့်က မိတ္ထီလာမြို့ လူစည်ကားရာ ကန်ကူးတံတားပေါ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ဝင်များ၊ ယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ကလေးငယ်များမှ ဖြတ်သန်းသွားလာနေသော ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ သုံးဘီးယာဉ်များပေါ်မှ ပြည်သူလူထုအား တစ်ခါသုံးနှာခေါင်းစည်းများ ဝေငှပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Writer – ၀ဏ္ဏ
Posted in NewsLeaveaComment on မိတ္ထီလာမြို့ လူစည်ကားရာနေရာတွင် H1N1 ကာကွယ်ရန် တစ်ခါသုံးနှာခေါင်းစည်းများ ဝေငှ
H1N1 နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှုများရှိကြောင်းနှင့် ဖြစ်လာပါက ကုသခြင်းများအတွက် နေ့စဉ်စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ် ကျန်းမာရေးဌာနမှ ရှင်းလင်း
H1N1 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှုများရှိကြောင်းနှင့် ဖြစ်လာပါက ကုသခြင်းများအတွက် နေ့စဉ်စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဌာနမှ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း H1N1 ဖြစ်ပွားလာပါက ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်း အခြေအနေအား ဇူလိုင် ၃၁ ရက်တွင်ပြုလုပ်သော ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ တစ်နှစ်တာကာလ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် Daily Eleven က မေးမြန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းမေးခွန်းအပေါ် ကာကွယ်ရေးအပိုင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် ပြည်သူကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာသီဟအောင်က “ပုံမှန်စောင့်ကြည့်လျက်ရှိတယ်။ နေ့စဉ်စစ်ဆေးသတင်းပို့ခြင်းတွေကိုလည်း လုပ်ဆောင်နေတယ်။ ကာကွယ်တားဆီးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း ပုံမှန်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ကာကွယ်သင့်သည့် နည်းလမ်းများကိုလည်း ပြည်သူသို့ချပြထားပေးခြင်းနှင့် လက်ကမ်းစာစောင်များ ဖြန့်ဝေခြင်းကိုလည်း လုပ်ဆောင်နေတယ်။ တုပ်ကွေးပုံစံမျိုးလူနာတွေကိုလည်း ဟုတ်မဟုတ်ကို စစ်ဆေးနိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်ထားတယ်။ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း မက်စ်တွေဖြန့်ဝေထားတယ်” ဟုလည်း သတင်းစာရှင်းပွဲတွင် ပြောကြားသည်။
အလားတူစွာပင် စစ်တွေပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှ ဆေးရုံအုပ်ဖြစ်သော ရခိုင်ပြည်နယ် ကုသရေးတာဝန်မှူး ဦးရွှေသိန်းကလည်း ပြည်နယ်အဆင့်၊ မြို့နယ်အဆင့်မှ ရွာအဆင့်အထိ စိစစ်လျက်ရှိကြောင်းနှင့် ပုံစံများနှင့်တကွ နေ့စဉ်သတင်းပို့ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ထားရှိကြောင်း၊ ရရှိလာသော သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်း ဗဟိုအဆင့်အထိ ပို့ဆောင်ပေးနေကြောင်း၊ အကယ်၍ ဖြစ်လာခဲ့သော်လည်း သေချာစွာကုသမှုခံယူနိုင်ရေးအတွက် ပြင်ဆင်ထားရှိကြောင်း၊ ယင်းသို့ပြင်ဆင်ရာတွင် သီးခြားအခန်းများကို ပြင်ဆင်ထားကြောင်း၊ ပြင်းထန်လူနာများ ဟုတ်မဟုတ်နှင့် သာမန်လူနာများကိုလည်း ခွဲခြားပြီးစစ်ဆေးကာ တုပ်ကွေး ဟုတ်၊ မဟုတ်ကို သေချာစွာစစ်ဆေးနေကြောင်း၊ သံသယရှိသော လူနာများတွေ့ရှိပါကလည်း ကုသရန်အတွက် ဆေးရုံတင်ရန် အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ထားကြောင်း ပြောကြားသည်။
ယင်းအပြင် အရေးပေါ်အခြေအနေ ဖြစ်လာခဲ့လျှင် ချက်ချင်းတုံ့ပြန်နိုင်ရေးအတွက် ဆေးအဖွဲ့ ၃၁ ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားပြီး လူနာများအား သီးခြားစီခွဲခြားကာ ကုသပေးနိုင်သည့် Isolation Ward များကို မြို့နယ်ဆေးရုံများတွင်လည်း ပြင်ဆင်ထားကြောင်းနှင့် တုပ်ကွေးဆိုင်ရာ ပညာပေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်းနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများသို့လည်း နှာခေါင်းစည်းများ ပံ့ပိုးပေးထားကြောင်းနှင့် လက်ရှိအခြေအနေတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ရောဂါဖြစ်ပွားမှုမရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
Writer – သန်းလှိုင်၊ ၀င်းမောင်
Posted in NewsLeaveaComment on H1N1 နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှုများရှိကြောင်းနှင့် ဖြစ်လာပါက ကုသခြင်းများအတွက် နေ့စဉ်စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ် ကျန်းမာရေးဌာနမှ ရှင်းလင်း
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် H1N1 ရောဂါဖြစ်ပွားသူ ၁၃ ဦးရှိပြီး ခြောက်ဦးသေဆုံး
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနက ဇူလိုင် ၃၁ ရက်တွင် အသိပေးရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်စဉ်
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ် ခုနစ်မြို့တွင် H1N1 ရောဂါဖြစ်ပွားသူ ၁၃ ဦးရှိပြီး သေဆုံးသူ ခြောက်ဦးရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ ဇူလိုင် ၃၁ ရက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် A(H1N1) လူတုပ်ကွေးရောဂါ လက်ရှိအခြေနေအား အသိပေးရှင်းလင်းပွဲမှ သိရသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားသူ ၄၀၆ ဦးရှိပြီး H1N1 ရောဂါဖြစ်ပွားမှု စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီးသူ ၁၃ ဦးရှိပြီး ၎င်းတို့အနက် သေဆုံးသူခြောက်ဦးရှိကာ မြို့နယ်များအလိုက် ဖြစ်ပွားမှုနှင့် သေဆုံးမှုများမှာ ပုသိမ်မြို့နယ်မှ ဖြစ်ပွားသူခြောက်ဦးတွင် သေဆုံးသူတစ်ဦး၊ ညောင်တုန်းမြို့နယ်မှ ဖြစ်ပွားသူနှစ်ဦးတွင် သေဆုံးသူတစ်ဦးရှိခဲ့ပြီး ဒေးဒရဲမြို့နယ်၊ ပန်းတနော်မြို့နယ်၊ ကျုံပျော်မြို့နယ်တို့တွင် တစ်မြို့နယ်လျှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပွားသူများသေဆုံးကြောင်း၊ ရေကြည်မြို့နယ်တွင် တစ်ဦးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး သေဆုံးသူမရှိသေးကြောင်း ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန စာရင်းများအရ သိရသည်။
“ဒီကာလဟာ တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နှင်းရေးအတွက် အရေးကြီးကာလဖြစ်တဲ့အတွက် ကျန်းမာရေးဌာနတစ်ခုတည်းက အလုံးစုံတာဝန်ယူရမယ်လို့ မခံယူကြဘဲနဲ့ အစိုးရနဲ့ ဌာနဆိုင်ရာများရယ် ဥပဒေပြုရေးဘက်မှပုဂ္ဂိုလ်များ ဌာနဆိုင်ရာများ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းများမှ ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သလို မီဒီယာများဘက်မှလည်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ တုပ်ကွေးရောဂါလက္ခဏာများ ရောဂါကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများကို ပြည်သူပြည်သားများ ဖော်ပြပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်း တိုက်တွန်းပြောကြားလိုပါတယ်” ဟု A(H1N1) လူတုပ်ကွေးရောဂါ လက်ရှိအခြေနေအား အသိပေးရှင်းလင်းပွဲတွင် ၀န်ကြီးချုပ် မန်းဂျော်နီက ပြောကြားသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်များအားလုံးတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားသူများအား စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း၊ ရောဂါဖြစ်ပွားပါက အချိန်မီထိန်းချုပ်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ရောဂါပြန့်ပွားမှုကို လျော့ပါးအောင် လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် ပြည်သူလူထုအနေနှင့် မဖြစ်မနေပါဝင်သင့်ကြောင်း၊ ပြည်သူလူထု ကျန်းမားရေးအသိပညာရှိစေရန် ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း အသိပေးရှင်းလင်းပွဲမှ သိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆရာကြီးဆရာမကြီးများလည်း ရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်မြို့နယ် အခြေအနေလေးတွေသိရအောင် တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့မြို့နယ်တွေကလည်း ကိုယ့်တံခါးလာခေါက်တဲ့အထိ စောင့်ဖို့မလို့ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လိုဆိုတော့ ပုသိမ်မှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ ငပုတောဘက်တော့ ပျော်နေတာပဲ။ ကန်ကြီးထောင့်ကလည်း ပျော်နေတာပဲ။ မပျော်နဲ့လာမယ်ဆိုတော့ ကြိုတင်ပြီး Awareness ရှိနေရမယ်။ ပြည်သူလူထုက Awareness ရှိနေပြီး ကျန်းမာရေးဌာနက နည်းနေသလို မဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ရမယ်။ ဆရာကြီးတို့ မလုပ်ဘူးပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လုပ်နေတဲ့အထဲကမှ အားပိုထည့်ပေးဖို့ပါ။ နောက်တစ်ခုက ဒါဟာအမျိုးသားရေး ပြဿနာဖြစ်တာမို့ လူတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာ လုပ်နိုင်တာထက် ပိုလုပ်ပေးဖို့ပါ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်” ဟု တိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးထွန်းမြင့်က ပြောကြားသည်။
(H1N1) ရောဂါမှာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံအတော်များများတွင် ဖြစ်ပွားနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားမှုအနည်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး တစ်ခုလုံးအတွက် ကျန်းမာရေးလက်ကမ်းကြော်ငြာ ၆၀၀၀၀ နှင့် ပိုစတာ ၁၅၀၀၀ ရိုက်နှိပ်ဖြန့်ဝေပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သီခြားအသိပညာပေးများ လုပ်ဆောင်လိုပါက ၀န်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားချက် သဘောတရာများအတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း ဆက်လက်သိရသည်။
Posted in NewsLeaveaComment on ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် H1N1 ရောဂါဖြစ်ပွားသူ ၁၃ ဦးရှိပြီး ခြောက်ဦးသေဆုံး